Inganekwane kaJesu ngokusho kwemisebenzi kaSolwazi Biyogo: USolwazi Grégoire Biyogo usitshela ngokucacile lokhu "Igama lesiGrikhi elithi Osiris livela kuKamite AUSAR, owanikeza u-IUSAR, owaba IOUSAR, IOUSA"
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 14, 2020 00: 01 Awekho amazwana
Ngemuva kwalokho iscript esithi ISAÂ, iNxusa lesenzo ukumemezela igama laphezulu elithi ISHA. Ngubani onikeze: 1- YESHU ngesi-Aramaic. 2- YEHOSHUA ngolimi lwesiHeberu. 3- 4-SÂ ngesi-Arabhu. I-5-ESESS ngesiGrikhi. XNUMX -... Funda kabanzi
Owesifazane wokuqala ochazwe njengodokotela emlandweni weplanethi kwakunguMerit Ptah: isithombe sakhe singabonakala ethuneni elise-necropolis eduze kwesigamu sephiramidi likaSaqqara
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 5, 2020 13: 41 Awekho amazwana
Indodana yakhe, eyayingumpristi ophakeme, yamchaza ngokuthi "udokotela omkhulu" uMerit Ptah waphila ngonyaka ka 2700 BC maduze nje udokotela omkhulu u-Imhotep. Funda kabanzi
Ukusuka ku-KMT kuze kube namuhla: ngabo-330, u-Alexander the Mnqobi nebutho lakhe labahlaseli base-Asia bacindezela amaKemeti ukuba abalekele eLower Nubia
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: May 1, 2020 03: 13 Awekho amazwana
Lo mcimbi uzoqoshwa njengokuphuma kokuqala okukhulu noma ukufuduka kokuqala okukhulu kwase-Afrika ngaphandle kweNayile Valley kulibangise enkabeni ye-Afuraka, nokufundwe ngabaseYurophu ... Funda kabanzi